के तपाईंले पनि डरलाग्दो सपना देख्नुहुन्छ ? एक उपकरण आउँदैछ, जस्ले तपाईंलाई गर्नेछ मद्दत | के तपाईंले पनि डरलाग्दो सपना देख्नुहुन्छ ? एक उपकरण आउँदैछ, जस्ले तपाईंलाई गर्नेछ मद्दत |
के तपाईंले पनि डरलाग्दो सपना देख्नुहुन्छ ? एक उपकरण आउँदैछ, जस्ले तपाईंलाई गर्नेछ मद्दत
उज्यालो प्रतिनिधि २३ कार्तिक २०७७, आईतवार प्रविधि
न्यूयोर्क । यदि तपाईंलाई रातमा डरलाग्दो सपनाहरू आउँछन र यसले तपाईंको निन्द्रा बिगार्दछ भने, तपाईंको लागि शुभ समाचार आउँदैछ। एप्पल कम्पनीले निद्रामा डर लाग्दो सपनाहरू हटाउन नयाँ उपकरण तयार गरेको छ । सब भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि अमेरिकाको फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ले यस नयाँ उपकरणको मार्केटिंगलाई अनुमोदन गरेको छ।
यो नयाँ उपकरण के हो ?
यो नयाँ उपकरणको नाम नाइटवेयर दिइएको छ । यो एक प्रकारको डिजिटल थेरापी हो जसले एप्पल वाच र एप्पल आईफोन प्रयोग गर्दछ, जुन नाइटवेयर सर्भरको साथ लगइन गर्न सकिन्छ । एफडीएले शुक्रबार भने, यो उपकरण २२ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका मानिसहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको हो जसले निन्द्राको समयमा डर लाग्दो सपना देख्दछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् ... गुगलले ल्यायो आफ्नै ‘टिकटक’
यस उपकरणले कसरी मद्दत गर्दछ ?
धेरै चोटि हामीसँग भएको कुनै पनि नराम्रो घटनाको बारेमा हामी धेरै चिन्तित हुन थाल्छौं वा यसका बारे हामीले सपनाहरू पाउँछौं । यस उपकरणले यस समस्यालाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। यो टच बेस्ड हुनेछ, जसले निद्राको बखत हर्ट रेट र हृदयको गतिसँग सम्बन्धित विवरणहरूको आधारमा नरम कम्पनको महशुस प्रदान गर्दछ।
यो पनि पढ्नुहोस् ... कोरोना भाइरसको प्रभाव : दुवईमा मोबाइल खरिदमा ४७ प्रतिशत छुट
प्रयोगकर्ता निद्रा रातको समयमा, एप्पल वाचमा सेन्सरले शरीरको चाल र मुटुको दरलाई अनुगमन गरिरहन्छ । यी सबै डाटा रात्रि सर्वरमा पुग्छन्, जुन प्रयोग गरेर उपकरणले प्रयोगकर्ताको लागि एक अद्वितीय स्लीप प्रोफाइल(यूनिक स्लीप प्रोफाइल ) सिर्जना गर्दछ।
यो पनि पढ्नुहोस् ... 'खप्पर फोर्ने' च्यालेन्ज टिकटक ट्रेण्डिङमा
नाइटवेयरले हृदय गति र शरीरको गतिको मूल्याङ्कन गर्दछ जब यो पत्ता लगाउँदछ कि प्रयोगकर्ताले डर लाग्दो सपना देखेको छ, एक उपकरण जसले एप्पल वाचको माध्यमबाट कम्पन वा भाईब्रेसनहरु पठाउँदछ। एफडीएले भने, नाइटवेयरले केवल प्रेसकोपीमा उपलब्ध हुनेछ।